Antananarivo, 11 mars 2021 : Manamafy ny fanampiany an’i Madagasikara i Japana amin’ny ady atao amin’ny Covid-19. Ny Ministeran’ny Rano, Fahadiovana, sy Fidiovana (MEAH), tamin’ny anaran’ny Governemanta Malagasy, no nandray ny fanomezana « gel mains » mitentina 547.050 dôlara amerikanina avy amin’ny orin’asa Japoney SARAYA, androany 11 Martsa. Tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asa iarahan’ny Governemanta Malagasy sy ny UNICEF, amin’ny alàlan’ny Ministeran’ny Rano, Fahadiovana, sy Fidiovana ity fanomezana ity.
Miaraka amin’i Malawi sy Comores, i Madagasikara dia anisan’ireo firenena nisitraka ny fanomezana avy amin’ny SARAYA Co Ltd, izay mpitarika eo amin’ny sehatry ny fahadiovan’ny tanana any Japana. Tany amin’ny biraon’ny UNICEF any Nairobi no nanatanterahana izany fanolorana fanomezana izany.
Mpianatra maherin’ny iray tapitrisa sy mpampianatra maherin’ny 25.000 avy amin’ny toeram-pampianarana (fanabeazana fototra, ambaratonga faharoa ary lisea) mitotaly 3.874 miparitaka amin’ny CISCO 28 no hisitraka ireo fitaovana ireo, ankoatra ny mpiasa sy ny olona izay mandeha eny amin’ireo tobim-pahasalamana 649 avy amin’ny sampana miadidy ny fahasalamana eo anivon’ny distrika amin’ny faritra sivy.
Marihina fa ny toeram-pampianarana sy ivotoerana fanofanana momba ny fahasalamana eny amin’ny toerana tena voakasiky ny Covid-19 ary ireo toerana sarotra ahazoana rano fisotro madio, no hatao lohalaharana. Tsara tsindrina ihany koa fa tavoangy 500ml miisa 12.500 no alefa any amin’ny Fivondronan’i Antananarivo renivohitra mba hanamafisana ny fanajana ireo fihetsika sakana any anatin’ny fiara fitateram-bahoaka, indrindra indrindra ho an’ireo fiarakaretsaka sy taxibe. Izany hetsika izany dia mbola mampiseho hatrany ny mahamanan-danja ny fahadiovana eo amin’ny fiainantsika andavan’andro mba ho fisorohana ny Covid-19 sy ny fiparitahany.
Ny Minisitry ny Rano, Fahadiovana, sy Fidiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa dia nankasitraka izany fanampian’i Japana, tamin’ny alàlan’ny orin’asa SARAYA Co Ltd izany. « Toy ireo firenena hafa, i Madagasikara dia tsy mitsahatra manamafy ireo fepetra iadiana amin’ny Covid-19. Manan-danja betsaka ho an’ny fitadiavantsika vahaolana eo amin’ny sehatry ny fidiovana ity fanomezana ity satria tena napetraka eo amin’ireo toerana telo marefo indrindra izay mora iparitahan’ny valan’aretina, toy ny sekoly, ny fanofanana ara-pahasalamana, ary ny fitateram-bahoaka izany fitaovana izany. Tena faly izahay noho izany, » araka ny nambaran’ny Minisitra Voahary Rakotovelomanantsoa.
« Japana dia nanapa-kevitra indray hanohana ny fitondrana Malagasy sy ny vahoaka Malagasy amin’ny ezaka matotra ataony amin’ny fiatrehana ny areti-mifindra » izany no nolazain’i HIGUCHI Yoshihiro, Ambasadaoron’i Japana eto Madagasikara. « Vonona hanao izay tratrin’ny heriny i Japana mba hanampiana an’i Madagasikara amin’ny ady amin’ny aretina Coronavirus, satria resy lahatra tanteraka izahay fa ny fahasalamam-bahoaka no fototra tena ilaina sy manan-danja indrindra eo amin’ny fampandrosoana tsimialonjafy izay imasoan’i Madagasikara fatratra ankehitriny ». « Ny fisorohana ny fiparitahan’ny Covid no anisan’ny làlana iray mahomby indrindra amin’ny ady amin’io valan’aretina io », hoy Michel Saint-Lot, solotenan’ny UNICEF eto Madagasikara. « Amin’ny alàlan’io fanomezana io dia afaka manohana misimisy kokoa ny governemanta izahay mba hanampiana ny vahoaka amin’ny fiarovan-tenany. »